अहो, म पनि त्यस्तै त छु। व्यस्त भएर मैले पनि आफ्नो परिवारलाई कहाँ समय दिएको छु र! यति व्यस्त भएर मैले पाउन खोजेको चाहिँ के? अब उनीहरु जस्तै मर्नुअगाडि पछुतो मान्ने ?
August 11th, 2012 मा पहिलो पटक प्रकाशित
1 thought on “मर्नु अगाडि मान्छे केमा पछुतो मान्दा रैछन्?”
यसै सह्दर्भ मा यो गीत धेरै मार्मिक छ
”यसै गरि बिताई दिन्छु , दुइ दिन को जिन्दगि ”
” हासो म लुटाइ दिन्छु , आफु आसु मा डुबी”
( सुखी हुने तरिका )
स्वर : नारायण गोपाल
गीत , संगीत : दिब्य खालिङ्ग
यो कुरा लक्ष्मी प्रसाद देबकोटा को कबिता
”खोज्छन सबै सुख भनि सुख त्यो कहा छ , आफु मिटाइ अरुलाई दिनु जहा छ |”